Madaxweynaha Puntland oo La Kulmay Bulshada Degmada Boosaaso.[Masawiro]
April 6, 2019 - Written by Editor
Boosaaso:-Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso.
Kulankan uu Madaxweynuhu la qaatay bulshada ayaa ka qabsoomay hoolka jaamacadda Bariga Africa, isagoona Madaxweynuhu u jeediyey khudbad taariikhiya oo koobsatay dharaarihii iyo dedaalka lagu asaasay Puntland, amniga, ganacsiga, maalgashiga iyo wadajirka shacabka iyo dowladda.
“Waxaan rabaa inaan si guud uga warbixiyo xaaladda uu dalku marayo, waxaa Alle mahaddiis ah in sandkii 21-aad ay ku jirto Puntland, mudadii la’aas aasay kadib dalkeenu waxaa uu soomaray taariikh aad u dheer, Maamulkii ugu horeeyey Puntland waxa uu ahaa Alle ha’unaxariistee Maxamed Abshir maamulkaas waxaa uu isku bedelay maamulkii SSDF”.
“Intaas kadib siyaasiyiintii iyo bulshadii waxay garteen in ay dhistaan Dowlad, dowladdaas oo ah dowladda aan maanta harsanayno oo laba qodob saldhigeedu ahaa in midnimadii Soomaaliya la ilaaliyo iyo dalka nidaam Federaal ah oo kaliya lagu dhisi karo” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha Dowladda Puntland ayaa si mug weyn ugu dheeraaday isbedelkii shacabka Puntland ay u riyaaqeen ee ka dhacay Puntalnd 08 Janaayo 2019”
“Xukuumaddan 08 Janaayo 2019 doorashooyinkii ka dhacay Garoowe oo isbadalka maamul uu ku yimid, waxaa runti mudadaas aad si dhow ula socoteen isbedel ay dadku daneenayeen, waxaan rajaynaynaa in aan ka dhabayno isbedelka ay doonayeen shacabka “Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Dowladda Puntand Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa aad uga hadlay amaanka magaalada Boosaaso, waxaana uu xusay in ay ka go’antahay sidii loo soo celinlahaa maqaamkii iyo amaankii xarunta ganacsiga Puntland oo ah meel halbowle u ah Soomaaliya, gaar ahaan dadka reer Puntland.
XAFIISKA WARFAAFINTA, WACYI-GELINTA, HIDDAHA IYO DHAQANKA MADAXTOOYADA DOWLADDA PUNTLAND.